जापानी जाडो कसरी रमाइलो गर्ने! स्की रिसोर्ट, चाडपर्व, बहाव आइस आदि। Best of Japan
यदि तपाइँ जाडोमा जाडोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन प्रकारको यात्रा उत्तम होला? यदि तपाईंले कहिल्यै चिसो जाडोको अनुभव गर्नुभएको छैन भने, म पहिले होक्काइडो सिफारिस गर्नेछु। अर्को, म तोहोकु क्षेत्र र केही चुबु क्षेत्रहरू सिफारिस गर्दछु। अर्कोतर्फ, टोकियो, ओसाका, र क्योटो जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा, तपाईं हिउँबाट अवरोध बिना पर्यटकीय भ्रमणका साथै अन्य मौसमहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म पर्यटन स्थलहरू परिचय गर्दछु जुन म सर्दमा सिफारिश गर्दछु।
डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरीमा जापानको आनन्द लिनुहोस्
हिउँ परेको पहाडहरू: स्कीइ and र स्नोबोर्डिंगको अनुभव
होक्काइडो र तोहोकुको ठूला शहरहरू: हिउँ चाडहरू र अधिकमा रमाउनुहोस्!
परम्परागत जापानी हिम दृश्य: शिराकावागो आदि।
चिसो समुद्रमा बहाव बरफ: अबाशिरी, शिरेटोको इत्यादि।
हिउँको संसारमा ओन्सेन (तातो स्प्रि)) लाई अनुभव गर्नुहोस्
जापानमा जाडोको जीवनको अनुभव लिनुहोस्
म जापानी जाडोमा हरेक महिना को लागी लेखहरु भेला गर्छु। यदि तपाईं त्यस्ता विवरणहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइड हेर्नुहोस् र तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना गर्दै गर्नुहुने महिनामा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ की जापानी जाडो मा कस्तो किसिमको कपडा लगाईन्छ, मैले यस विषयमा लेख पनि लेखें।
डिसेम्बरमा जापान एकैचोटि चिसो हुन्छ। वर्षको यस समयमा, जापानी शहरहरू क्रिस्मस इल्मिनेमेसनद्वारा राम्ररी रंगिएका छन्। जापानमा त्यहाँ केही ईसाईहरू छन्, तर जापानी मानिसहरूलाई घटनाहरू मनपर्दछ, त्यसैले उनीहरूले क्रिसमसको वातावरणको आनन्द लिन्छन्। यदि तपाईं डिसेम्बरमा जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ भने तपाईं यी सुन्दर प्रकाश र वातावरणको मजा लिन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, केही क्षेत्रमा हिउँ पर्न थाल्छ, त्यसैले तपाईं हिउँ परिदृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। डिसेम्बरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको सामग्रीको तालिका डिसेम्बरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको हिउँदे दृश्यहरूको अनुभव यदि तपाईं डिसेम्बरमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् अधिक जानकारी हेर्नका लागि। रोशनी हुइस टेन बॉश = शटरस्टक प्रमुख जापानी शहरहरूमा, क्रिसमसको प्रकाशहरू डिसेम्बरमा सुन्दर हुन्छन्। धेरै सडक रूखहरू एक्लो वातावरण हुन्छ किनकि पातहरू सबै छरिएका हुन्छन्। रोशनीले त्यो एक्लो वातावरणलाई परिवर्तन गर्दछ र हाम्रो हृदय उज्ज्वल बनाउँछ। क्रिसमस गीतहरू शहर वरिपरि सुन्न सकिन्छ। क्रिश्चियन देशका मानिसहरु लाई यो अनौठो हुन सक्छ तर जापानीहरु को लागी, क्रिसमस एक महत्त्वपूर्ण समय हो। जापानी मानिसहरु एक अर्कालाई उपहार दिन्छन्, आफ्नो परिवार सहित, र एक राम्रो समय छ। प्रेमीहरूले क्रिसमसको सजावटको साथ र colored्गीन रेस्टुराँमा विशेष समय साझा गर्छन्। माथिको तस्वीरले क्युसुको ह्युस टेन बॉश थिम पार्कमा हरेक वर्ष डिसेम्बरमा आयोजित रोशनी देखाउँदछ। प्रत्येक वर्ष, टोक्यो डिज्नी रिजोर्ट र ओसाकामा युनिभर्सल स्टुडियो जापानले यस्तै सुन्दर प्रकाशहरू तयार पारेको छ। कृपया यी क्रिस्मस इलिमिनेमेसनहरूलाई सबै तरिकाले हेर्नुहोस्। क्रिसमस सकिसकेपछि, मानिसहरू ...
जनवरीको सुरूमा धेरै जापानी मानिसहरु नयाँ वर्षको बिदा लिन्छन्। यस समयमा मन्दिर र मन्दिरहरू भीडभाड छन्, त्यसैले कृपया सावधान रहनुहोस्। जनवरीमा, होक्काइडोमा मात्र होइन तर जापानको सागर छेउमा होन्शु र हिमाली क्षेत्रहरुमा हिउँ पर्न थाल्छ। यदि तपाईं त्यस्तो क्षेत्रमा जानुहुन्छ, तपाईं जापानको हिउँ प्रकृतिबाट आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। जनवरीको उत्तरार्द्ध पछि, केही मन्दिरहरू र मन्दिरहरूमा सामान्य हिउँदको चाड हुन्छ। तिनीहरू आफैंमा उपस्थित हुन पनि सिफारिस गरिन्छ। सामग्रीको तालिका जनवरीमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारीeटेम्पल र तीर्थस्थलहरू जनवरीको सुरुमा धेरै नै हूलद are्गा देखिन्छन् जनवरीमा आयोजित हुने जाडो समारोह उत्सव जनवरीमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको सूचना यदि तपाईं टोकियो, ओसाका जाने योजना बनाउनुहुन्छ वा जनवरीमा होक्काइडो, कृपया तलका स्लाइडरमा थप जानकारीका लागि छवि क्लिक गर्नुहोस्। जनवरीको सुरुमा मन्दिर र तीर्थ स्थानहरू धेरै भीड हुन्छन् जनवरीको शुरुमा, जापानमा नयाँ वर्षका कार्यक्रमहरू प्रत्येक वर्ष गरिन्छ। मानिसहरू प्रायः मन्दिर वा मन्दिरमा प्रार्थना गर्न प्रार्थना गर्दछन् जसले वर्षलाई राम्रोसँग बिताउन सक्दछन्। यदि यस समयमा तपाईले जान चाहानु भएको मन्दिर वा मन्दिर ठूलो छ भने, तपाईले नयाँ बर्ष अवधिमा लाखौं मानिस आउने अपेक्षा गर्न सक्नुहुनेछ। एकैचोटि सबै भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या देखेर तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। यदि तपाईं भीड मान्नुहुन्न भने, तपाईं जापानी जनता मुख्य मन्दिर र मन्दिरको लागि एकदम व्यवस्थित हिंड्न सक्नुहुन्छ। वास्तविक हिम दृश्यको लागि जानुहोस् ...
फेब्रुअरी जापानको सबैभन्दा चिसो समय हो। ओकिनावा जस्ता केहि क्षेत्रहरू बाहेक, शहरमा हिंड्दा तपाईंलाई कोट वा जम्पर चाहिन्छ। यस समयमा, स्की रिसोर्टहरू तिनीहरूको उत्तम अवस्थामा छन्। हिउँ पर्ने क्षेत्रमा, तपाईं सुन्दर हिउँद दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं गाइड पुस्तकमा देख्न सक्नुहुन्छ। यी चीजहरू बाहेक, फेब्रुअरीमा यात्रा गर्दा अर्को रमाइलो कुरा पनि छ। जाडोको विभिन्न चाडहरु जापानको विभिन्न भागहरु मा आयोजित गरिन्छ। यस पृष्ठमा, म मुख्य रूपमा यी जाडो चाडहरूको परिचय दिनेछु। सामग्रीको तालिका फरवरीमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारी फेब्रुअरीमा प्रत्येक फेब्रुअरीमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको सूचनाहरू दिइन्छ यदि तपाईं फेब्रुअरीमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया थप विवरणका लागि तलको लिंक अनुसरण गर्नुहोस्। प्रत्येक फेब्रुअरीमा आयोजित शीतकालीन चाडहरू यहाँ जाडोको चाडहरू छन् जुन म तपाईंलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु। योकोटे कामकुरा हिउँ महोत्सव सबैभन्दा पहिले, म उत्तरी होन्शुको अकिता प्रान्तको योकोटेमा प्रत्येक वर्ष मनाउने प्रसिद्ध फेस्टिवलबाट शुरू गरौं। प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी मा, स्थानीयहरु माथिको फोटो मा देखिए अनुसार "योकोटे कनकुरास महोत्सव"। "कामकुरा" हिउँले बनेको सानो गुम्बज हो। योकोटे शहरमा प्रत्येक वर्ष धेरै हिउँ पर्ने भएकोले मानिसहरूले हिउँ कडा बनाउँदछन् र "कामकुरा" बनाउनका लागि यसलाई काट्छन्। यो उत्सव अवधिमा, योकोटे शहरमा, 100 मिटरको उचाईको साथ १०० "कामकुरा" बनाइन्छ। तलको चित्रमा देख्न सकिन्छ, त्यहाँ धेरै साना "कामकुरा" पनि छन्। कामकुरामा स्थानीय मानिसहरूले ...
जाडो मौसममा जापान यात्रा गर्दा तपाईले कस्तो किसिमको लुगा लगाउनु पर्छ? यदि तपाइँ आफ्नो देशमा चिसो जाडोको अनुभव गर्नुहुन्न भने, तपाइँले के लगाउनु पर्छ होला भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जाडो मा जापान मा यात्रा को लागी लुगा को बारे मा केहि सहयोगी जानकारी को लागी परिचय गराउनेछु। मैले तल जाडोका लुगाहरूको तस्वीर पनि बनाए। यदि तपाईं होक्काइडो जाँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्। सामग्रीको तालिका तपाइँ जाडोमा राम्रोसँग कोट वा जम्पर लगाउनुहुन्छ जापानी जाडोमा लगाउने लुगाहरूको उदाहरण होक्काइडो विशेष गरी चिसो छ, त्यसैले होशियार! हिउँदमा तपाईले राम्रो कोट वा जम्पर लगाउनुपर्दछ सामान्यतया होन्शु, क्युशु र शिकोको बसोबास गर्ने जापानीहरूले डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीको अन्तसम्म कोट वा जम्पर लगाएका हुन्छन्। यस बीच, जब हामी न्यानो भवनमा हुन्छौं, हामीले हाम्रो कोट निकाल्यौं र ज्याकेट लगाउँदछौं जस्तो कि शर्टमा स्वेटर। होक्काइडोमा बस्ने जापानीहरूले नोभेम्बरसम्म कोट वा जम्पर लगाउने छन्। डिसेम्बरमा तिनीहरूले होन्शुका जापानी मानिसहरू भन्दा थोरै मोटा कोट लगाएका छन्। जब यो चिसो हुन्छ, जस्तै साँझमा, तिनीहरू ऊन टोपी लगाउँदछन् वा तातो राख्नको लागि ग्लोभहरू लगाउँछन्। अर्कोतर्फ, ओकिनावामा, त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले जाडोमा पनि कोट लगाउँदैनन्। प्रत्येक ग्रीष्म ,तुमा, जापानीज द्वीपसमूह जुनसुकै ठाउँमा पनि तापक्रममा मिल्दोजुल्दो छ (सबै ठाउँमा तातो!), तर जाडोमा तापक्रम स्थानमा निर्भर गर्दै फरक फरक हुन्छ। जाडोमा, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईको अनुसार सबैभन्दा उचित कपडा तयार गर्नुहोस् ...
यहाँबाट, म जाडोमा जापानको यात्रामा सिफारिश गर्न सक्ने पर्यटन स्थलहरूको परिचय दिनेछु। मैले जापानमा जाडोको वातावरणको आनन्द लिन यस पृष्ठमा मैले तपाईंलाई धेरै भिडियोहरू र छविहरू थपें।
रूखहरू होर फ्रस्ट, जाओ, यामागाता प्रान्तको साथ कभर गरिएको
Nishiho सन्सो जाडो को बिहानको वरिपरि, मत्सुमोटो, नागानो, जापान = एडोब स्टक
जाडोको गन्तव्यको रूपमा, म होकाइडो, तोहोकु क्षेत्र, र चुबु क्षेत्रहरू जस्ता पहाडी क्षेत्रहरूको सिफारिश गर्दछु।
सिफारिस गरिएका गन्तव्यहरू:
Ise निसेको (होक्काइडो)
· तोमामू (उत्तर समुद्री तह)
· जाओ (यामागाता प्रान्त, मियागी प्रान्त)
· हाकुबा (नागानो प्रान्त)
· त्सुगाइक पठार (नागानो प्रान्त)
Us कुसात्सु ओन्सेन (नागानो प्रान्त)
· नाइबा (निगाता प्रान्त)
यी गन्तव्यहरू ठूला स्की रिसोर्टहरू छन्। यहाँ तपाईं स्कीइ and र स्नोबोर्डिंगको मजा लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ शुरुवात गर्नेहरूका लागि पाठ्यक्रमहरू पनि छन्, त्यसैले तिनीहरू जो स्किड वा स्नोबोर्ड छैन उनीहरूले पनि रमाउन सक्दछन्। स्की र स्की लुगाहरू यी रिसोर्टहरूमा भाँडामा लिन सकिन्छ।
त्यहाँ गोन्डोलाहरू र लिफ्टहरू स्की रिसोर्टहरूमा छन् ताकि तपाईं सजिलै हिउँका पहाडहरूको शिखरमा जान सक्नुहुन्छ। शीर्षबाट देख्न सक्नुहुन्छ हिउँ परिदृश्य साँच्चै आश्चर्यजनक छ।
जब यो घमाइलो हुन्छ र तापक्रम एकदम कम हुन्छ, यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाईंले माथीको पहिलो भिडियो जस्तो हीराको धूलो देख्न सक्नुहुनेछ। हावामा पानीको बाफ बरफ क्रिस्टलमा परिणत हुन्छ र यो चम्किलो देखिन्छ।
दोस्रो भिडियो हाकुबा (नागानो प्रान्त) को स्की रिसोर्टमा लगियो। हकुबा एक आकर्षक स्की रिसोर्ट हो जो होक्काइडोको निसेकोसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
यी ठूला स्की रिसोर्टहरूसँग पनि ठाउँहरू छन् जहाँ बच्चाहरू हिउँमा खेल्न सक्छन्।
किनभने कुसात्सु ओन्सेन र नाएबा सबै जापानका प्रतिनिधि तातो स्प्रि .हरू हुन्, तपाईं तातो स्प्रि experienceहरू पनि अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। तातो स्प्रि Regarding्गको बारेमा, म अधिक जानकारी पछि प्रदान गर्नेछु।
यदि तपाईं सजिलै हिउँका क्षेत्रहरू अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने, म कारुइजावा (नागानो प्रान्त) सिफारिश गर्दछु। टोकियो देखि करुइजावा मा यो Hkuriku Shinkansen द्वारा 1 घण्टा छ। करुइजावा जापानको लक्जरी रिसोर्ट क्षेत्र प्रतिनिधि हुन्।
करुइजावामा त्यहाँ धेरै हिउँ छैन, तर त्यहाँ कृत्रिम हिउँ प्रयोग गरेर स्की रिसोर्ट छ। जापानको अग्रणी आउटलेट मल्ल र लक्जरी स्पा होटेल मध्ये एक पनि छ, त्यसैले तपाईंको परिवार पनि खुशी हुनेछ।
यसको विपरीत, यदि तपाईं वास्तविक हिउँ परेको पहाडमा चढ्न चाहनुहुन्छ भने, नागानो प्रान्तको मात्सुमोटो शहर वरपरको पहाडी क्षेत्र सिफारिस गरिएको छ। माथिको दोस्रो चित्र मात्सुमोोटोको नजिक हिउँ परेको पहाडमा लगिएको थियो। यद्यपि जापानका दिग्गज पर्वतारोहीहरूलाई पनि गाह्रो लाग्न सक्छ। यो गाह्रो हुन सक्छ यदि तपाईं हिमाली पहाड चढ्ने अभ्यस्त व्यक्ति हुनुहुन्न।
सप्पोरो हिउँ फेस्टिवल २०१ ((सप्पोरो युकी मत्सुरी) होक्काइडो = शटरस्टक
अकितामा कामकुरा चाड, जापान हिम उत्सव = शटरस्टक
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि स्किइing तपाईंको लागि हैन भने म तपाईंलाई होक्काइडोका ठूला शहरहरू भ्रमण गर्न सिफारिस गर्दछु।
तोहोकु क्षेत्रका केही ठूला शहरहरू र केही मध्य क्षेत्रहरू (नागानो प्रान्त, निगाता प्रान्त, ईशिकवा प्रान्त, आदि) पनि म सिफारिस गर्दछु।
यदि तपाई त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले धेरै हिउँ देखेको छैन भने शहरहरूमा हिँड्न रमाईलो हुन सक्छ। जाडोमा सुशी र केकडा भाँडा एकदम स्वादिलो ​​हुन्छ, खानपानले तपाईंलाई धेरै खुशीको मुडमा राख्न सक्छ।
यि धेरै ठूला शहरहरूमा चाडहरू प्रायः जाडोमा गरिन्छ। यदि तपाईं त्यस समयमा त्यहाँ जानुहुन्छ भने, तपाईं शानदार हिउँ र बरफको संसारको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
विशेष गरी सिफारिस गरिएका शहरहरू तल सूचीबद्ध छन्।
Pp सप्पोरो (होक्काइडो)
· असाहिकावा (होक्काइडो)
Ok योकोटे (अकिता प्रान्त)
जे होस्, त्यहाँ चाड़ अवधि को समयमा धेरै पर्यटकहरु छन्, तपाईं होटल बुक गर्न सक्षम हुनुहुन्न। तपाइँ अग्रिम तयारी र आरक्षण राम्रो गर्नुपर्छ।
जाडो मौसममा, भारी हिउँ पर्ने संग जापानी गाउँ भ्रमण गर्न यात्रा धेरै लोकप्रिय छ। उदाहरण को लागी, एक ठूलो संख्या पर्यटक माथिको भिडियो मा देखा Gifu प्रान्त को Shirakawago भ्रमण।
भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिले विभिन्न कौडीहरू बनाए जस्तै आफ्नो छानाको विकर्ण बनाउने र हिउँलाई कडा बनाउन कडा मेहनत गर्ने। यस तरीकाले, तिनीहरूले कठोर जाडो पार गर्न सक्षम छन्। जब तपाईं यस समयमा भ्रमण गर्नुहुन्छ तपाईं त्यस्ता परम्परागत जापानी जीवित देख्न सक्नुहुनेछ।
टोकियो, ओसाका र क्योटो जस्ता ठूला शहरहरूमा पनि कहिलेकाहीं हिउँ पर्दछ। ती ठूला शहरहरूमा, यदि हिउँ पनि अलिकता खस्यो भने, यातायात ढिलाइ हुनेछ र भ्रम पैदा हुन्छ।
यद्यपि हिउँ पर्यटन स्थलहरूमा पर्दा, तपाईं सुन्दर दृश्यहरूको मजा लिन सक्नुहुनेछ जुन सामान्य भन्दा भिन्न छ। तलका चित्रहरू किफुने मन्दिर (क्योटो) र किंकाकुजी (क्योटो) बाट लिइएको हो। तपाईं यी हिउँ दृश्यहरू सजिलैसँग आउन सक्नुहुन्न।
यदि तपाईं क्योटोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र यो सुन्न आउँछ भने, तपाईं धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। म बिहान सबेरै यो हेर्न जान सिफारिस गर्दछु रातमा हिउँ पर्दा।
क्योटो = शटरस्टकमा स्नो किफ्यून दरबार
हिउँदको हिउँदको साथमा गोल्डन मंडप (किंकाकुजी) शीत Seतु = शटरस्टक
रासु-डेक र बहाव आइस, होक्काइडो = शटरस्टक
यदि तपाइँ साँच्चिकै चिसो जाडोको अनुभव लिन चाहानुहुन्छ भने उत्तरी होक्काइडो (आबाशिरी, मोन्बेत्सु, शिरेटोको उरोत्रो रासु) मा पनि हिउँको सतहहरू हेर्न सल्लाह दिइन्छ।
फेब्रुअरीको सुरुदेखि मार्चको मध्यसम्म, तपाईं हरेक वर्ष उत्तरी होक्काइडोको तटमा साइबेरियाबाट आइस ड्राफ्ट देख्न सक्नुहुन्छ।
के म अधिक सिफारिश गर्न चाहन्छु बरफ हेर्न एक समर्पित दर्शनीय डु take्गा लिनु हो।
अबाशिरी इत्यादिमा, तपाईं पहाडबाट बग्ने बरफमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जब समुद्र बग्ने बरफले ढाकछ र छालहरू शान्त हुन्छन् यो एकदम शान्त हुन्छ। राजसी, शानदार दृश्यले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछ।
यद्यपि तापक्रम फ्रिजिंग बिन्दु र २० डिग्रीको बीचमा खस्छ त्यसैले यो धेरै चिसो छ। खास गरी जब हावा कडा हुन्छ, तपाई एकदम चिसो जाडोको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई चाहानुहुन्छ भने! कृपया धेरै लुगा लगाउने निश्चित गर्नुहोस्!
आइसब्रेकिंग जहाज "Garinko", Monbetsu, Hokkaido
यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाईं छापहरू पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ
नागानो प्रान्त र होक्काइडोमा त्यहाँ स्थानहरू छन् जहाँ बाँदरहरूले तातो स्प्रि =हरू = एडोब स्टक प्रविष्ट गर्छन्
यदि तपाइँ जाडोमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तातो स्प्रि experience्ग्सको अनुभव गर्नुहोस्। चिसो घर बाहिर चिसो मा तपाइँको शरीर शायद धेरै चिसो हुनेछ। तातो स्प्रि .ले तपाईंको शरीरलाई तातो पार्नेछ।
जापानी द्वीपसमूह मा, तातो स्प्रि here्ग्स यहाँ र त्यहाँ जाँदै छ। प्रख्यात तातो वसन्त रिसोर्टमा जानुहोस् र होटल वा परम्परागत जापानी आवास (सराय) मा रहनुहोस् र तातो वसन्तको आनन्द लिनुहोस्।
होक्काइडो र तोहोकु क्षेत्रको हिउँ पर्यटक क्षेत्रहरूमा, तपाईं हिउँ पतन देख्दा तातो स्प्रि springमा पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ यो अद्भुत स्मृति हुनेछ।
नागानो प्रान्त र होक्काइडोमा, तपाईं जाडोमा बाहिरी तातो वसन्तमा जंगली बाँदरहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
बाँदरहरू वास्तवमै ओन्सेनमा प्रवेश गर्छन् र आरामदायक भावनाको साथ बाहिर जान्छन्। यदि तपाईं केवल तस्वीरहरू लिन चाहानुहुन्छ भने, कृपया नजिकैको भ्रमण गर्नुहोस्।
हिउँदमा जिन्जान-ओन्सेनको ऐतिहासिक जिल्ला = एडोब स्टक
हिउँ पर्ने ठाउँमा, एकै रातमा धेरै स्नोडहरू छन्
यदि तपाइँ जाडोमा जापानको उत्तरी भागको भ्रमण गर्नुहुन्छ भने कृपया जापानीहरू कसरी हिउँमा बस्छन् भन्ने अवलोकन गर्नुहोस्।
ग्रामीण क्षेत्रमा, जब हिउँको थुप्रो आउँछ, मानिसहरू छतमा उठ्छन् र हिउँ हटाउँछन्। म यसलाई "हिउँ वर्षा" भन्छु।
सप्पोरो जस्ता ठूला शहरहरूमा, हामी तहखाने मा एक ठूलो गलियारे छ कि हिउँ पसे पनि यसले हाम्रो जीवन मा एक ठूलो प्रभाव छैन।
जापानमा बच्चाहरू हिउँसँग हिउँसँग खेल्छन्। म पनि तपाईं बच्चाहरूको हँसदै देखाएको हेर्न चाहान्छु।
बच्चाहरू स्नोम्यान बनाउँदै